Wefti Masar iyo Kenya socdaallo ku soo maray oo dalka ku soo laabtay kana hadlay natiijada safarkooda | Berberanews.com
Home WARARKA Wefti Masar iyo Kenya socdaallo ku soo maray oo dalka ku soo laabtay kana hadlay natiijada safarkooda
Hargeysa-(Berberanews)- Wasiirrada Arrimaha dibeda iyo Madaxtooyada Somaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo socdaal oo muddo laba toddobaad ah dalka dibeddiisa safarrasho shaqo ugu maqnaa, ayaamaanta dalka dib ugu soo laabtay.
Wasiirka Arrimaha dibedda Maxamed Cabdillaahi Cumar, oo qolka nasashada ee madaarka Hargeysa ugu warramay Weriyayaasha ayaa sheegay in socdaalka ay ku tageen dalalka Masar iyo Kenya uu ka dhashay marti-qaad rasmi ah oo ay ka heleen dawladda Masar. Waxaanu sheegay inay kulammo aad u muhiim ah Qaahira kula yeesheen Masuuliyiin ka tirsan dawladda Masar. Waxaanu sheegay inay madaxdaa ka wadahadleen sidii ay xidhiidh buuxa oo iskaashi iyo ganacsi u wada yeelan lahaayeen Somaliland iyo Masar.
“Dhammaan masuuliyiintii aanu la kulanay waxaanu kala hadlay danaha qaranka Somaliland, waxaana aanu isla faaqidnay sidii labada dal ay u yeelan lahaayeen iskaashi balaadhan oo ku wajahan dhinacyada siyaasadda, ganacsiga iyo waxbarashada.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibedda Somaliland.
Wasiirka Arrimaha dibaddu waxa kale oo uu xusay in Weftigiisu ay kulan kula yeesheen safiirrada iyo dublamaasiyiinta wadamada reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi oo ay kala hadleen sidii ay u sii xoojin lahaayeen xidhiidhka wadamadoodu la leeyihiin Somaliland.
Maxamed Cabdillaahi waxa kale oo uu carabka ku dhuftay inay safiirradda uga warameen sida ay xukuumada Somaliland uga go’an tahay doorashada goleyaasha deegaanka ee lagu wado inay dalka ka qabsoonto sanadka 2012-ka ee fooda inagu soo haya.
Wasiirku wuxuu sheegay inay magaalada Qaahira kula kulmeen Wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee dalka Masar, Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha dibedda iyo Masuuliyiin ka tirsan Ururka Jaamacadda Carabta.
Previous PostXildhibaan Wakiillada Somaliland ka tirsan oo Guddoomiyaha Guddi uu ku jiro ku tilmaamay Mudane Cid kale Warbixin siiya Next PostVidic Oo Qaaliinkiisa Lagu Guuleystay Lana Filayo Inuu Soo Laabto Xilli Ciyaareedka Soo Socda.